सलाम वालेकुम भन्दै विमानस्थलमा बमको सुचना, त्यस पछि के के भयो ? - NewsPolar NewsPolar
★ उजुरी पर्दैमा सबै दोषी ठहरिँदैन: आयुक्त सिलवाल ★ यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आयोगको आग्रह ★ अन्तरघातले चुनाव हारियो – ओली ★ जलविद्युत् आयोजनाबाट म्याग्दीका बासिन्दालाई दोहोरो लाभ ★ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारी जग्गाको खोजी ★ गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता : वरिष्ठ नेता पौडेल ★ आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नेकपा एसको सर्कुलर ★ करोडको गाडी चढेर जनताको समस्या देखिदैँन : नवनिर्वाचित प्रमुख साम्पाङ ★ जनस्तरमा कांग्रेसको लोकप्रियता बढ्यो : महामन्त्री थापा ★ यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु (भिडियोसहित)
सलाम वालेकुम भन्दै विमानस्थलमा बमको सुचना, त्यस पछि के के भयो ?
२१ बैशाख २०७९, बुधबार १२:२०
काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याण्डलाईन टेलिफोनमा एक पुरुषले विदेशको नम्बरबाट बिहान ९ः ४० बजे फोन गर्यो ।
उसले सलाम वालेकुम भन्दै विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ सात सात वटा बम रहेको र दुई घण्टामा पड्किने बतायो । सोही व्यक्तिले फेरी ९ः५० मा फोन गरेर सोही कुरा भन्यो । ९ः४० देखि ९ः५० को अवधिमा त्यस नम्बरमा तीन वटा कल आएको छ । ती नम्बरहरुबारे हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ ।
यसबारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई पनि सूचित गरेका छौँ । सात ठाउँमा बम राखिएको र दुई घण्टाभित्र विष्फोट हुँदैछ भनेपछि हामीले तत्कालै टर्मिनलभित्र रहेका यात्रु विमानका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरुलाई बाहिर पठायौँ ।
आन्तरिकतर्फको क्षेत्र खाली गराएपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीसहित नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सर्च भयो । करिब एक घण्टा सर्च गर्दा त्यस्तो वस्तु भेटिएन । त्यसपछि उडानहरु सुचारु गरेका छौ । करिब एक घण्टा उडान अवरोध भएका कारण बेलुका सम्म सबै अबरोध भएका उडानहरु सुचारु हुन्छन् ।
विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित
आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नेकपा एसको सर्कुलर